Taliye K/Xigeenkii hore ee Nabad Sugidda oo laga dhigay dhammaan daroojinkii ciidan, lagana ruqseeyay Hay’adda – Hiddo Radio 98.5 FM
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ruqseeyay kana dhigay dhammaan darajooyinkii ciidan ee hay’adda nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka EX.Sarreeye Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed kadib soo jeedin ka timid Agaasimaha Guud ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Warqadda soo jeedinta ah oo Madaxweynaha ka soo gaartay Xafiiska Agaasimaha Guud ee Hay’adda Mudane Xuseen Cismaan Xuseen ee loo cuskaday go’aankan ayaa lagu caddeeyay in sarkaalkan uusan ka sii mid ahaan karin hay’adda iyada oo la tix raacayo go’aankii ay gaareen guddiga anshaxa.
” EX.Sarreeye Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed waxaa laga dhigay ama laga qaaday dhammaan darajooyinkii ciidan, isla markaana waxaa laga ruqseeyay hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaliyeed sababo la xiriira xadgudub sharciga ciidamada qalabkasida iyo xeer hoosaadka Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.” Ayaa lagu sheegay wareegtada Madaxwaynaha.
Previous Article Masar waxaa ay xukuntay in ka badan 700 oo Ikhwaanul Muslimiin ah
Next Article Weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta dagmada hodan